စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page7of 30 | Frontier Myanmar
တောင်သူဦးကြီးများအတွက် “ထွက်တိုး” မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို မိတ်ဆက်
လဒွဲနှင့် ယောင်ထန် တောင်သူဦးကြီးများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဂြိုလ်တုမှရှာဖွေရရှိထားသော စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အချက်အလက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် “ထွက်တိုး” မိုဘိုင်းလ် အက်ပလီကေးရှင်းကို ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအက်ပလီကေးရှင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အသုံးဝင်မည့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ ရာသီဥတု၊ ကောက်ပဲသီးနှံ ဈေူနှုန်းများကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေသူများ.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်သိန်းခွဲခန့် စင်ကာပူသို့ သွားရောက်လည်ပတ်
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ဧည့်သည် ၁၄၆,၀၀၀ ဦး စင်ကာပူသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစံချိန်ကို ကျော်လွန်ခဲ့ကြောင်း SINGAPORE TOURISM BOARD က ပြောကြားသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၁၄,၀၀၀ ဦး လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇.
ဆမ်ဆောင်း၏ Galaxy S9 နှင့် S9+ စမတ်ဖုန်းသစ်များ ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီ
ဆမ်ဆောင်း၏ စမတ်ဖုန်းသစ်များဖြစ်သည့် Galaxy S9 နှင့် S9+ တို့ကို ပြည်တွင်း၌ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီး ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် ကြိုတင်မှာကြားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆမ်ဆောင်းက ပြောကြားသည်။ “အခု Galay S9 နဲ့ S9+ ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားရတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို အခုလို.
TECNO အမှတ်တံဆိပ် မိုဘိုင်းဖုန်းများ ပြည်တွင်းဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်
အာဖရိက၏ ထိပ်တန်း ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်သုံးခုထဲတွင် ပါဝင်သည်ဆိုသည့် TECNO အမှတ်တံဆိပ် မိုဘိုင်းဖုန်းများအား ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ Transsion Holdings ကုမ္ပဏီ၏ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Techno Mobile က ၎င်း၏ နောက်ဆုံးထုတ် စမတ်ဖုန်းများဖြစ်သည့် CAMON CM နှင့် SPARK.